समयमै काम हुने विश्वास::Online News Portal from State No. 4
समयमै काम हुने विश्वास
चलनचल्तीमा रहेको भाषामा सांसद विकास कोष अर्थात् राज्यको पुनःसंरचना भएपछि नामाकरण गरिएको स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट यष बर्ष बागलुङमा सदुपयोग हुने देखीएको छ । निर्वाचित सांसदहरुले बितरण गर्न पाउने गरी बिगतमा करोडौं रुपैयाँ बिनियोजन हुने गरेको भएपनि यो रकम साना तथा पार्टिका नेता तथा कार्यकर्ताको महत्वकांक्षाका आधारमा वितरण हुने र रकम दुरुपयोग हुने गरेको तितो यथार्थलाई हामीले नकार्न सक्दैनौं । यस बर्ष बागलुङका दुवै क्षेत्रमा यो रकम सदुपयोग हुने गरी वितरण भएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणमा केही न केही विकास हुने वा दुरुपयोग कम हुने आशा पलाएको छ । स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यबिधिले तोकेको भन्दा पनि उदार बनेर बितरण गरिएको रकमले समयमा काम हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
कार्यबिधिले कम्तीमा दुई वटा योजना ५० लाखका हुनुपर्ने र २० वटासम्म योजना बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर बागलुङको क्षेत्र नं १ का स्थानीय तह राजनीतिक दलहरु, र सांसदहरुले जुन खालको उदारता देखाएर सबैको चित्तबुझ्ने योजनाको छनौट गरेर साझेदारीमा बाँड्न मिल्ने चार करोड रुपैयाँ जुन योजनाहरुका लागि बाँडियो त्यसको प्रभाव सकरात्मक पर्नेछ । सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि प्रदान गर्ने स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्र्तगत बागलुङ क्षेत्र नम्बर एकमा ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिईएको छ । क्षेत्र विकासका लागि आउने बजेट साना–तिना योजनाहरुमा बाँड्दा उल्लेख्य काम देख्न नसकिएकाले क्षेत्र नम्बर एकका चार वटा योजनालाई प्राथमिकता दिइएको हो । चार स्थानीय तह रहेको क्षेत्र नं. १ मा प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक करोड रुपैयाँ पर्ने गरी योजनाहरुको छनौट गरेर साझेदारीमा बजेटको बिनियोजन हुनु सुखद पक्ष हो । यसका लागि सांसदहरुले जुन खालको भुमीका निर्वाह गरे त्यो निकै प्रसंसनिय छ ।
कार्यक्रममार्फत बागलुङका बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, काठेखोला गाउँपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले एकवटा योजना छनोट गरेर काम गर्नेछन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट प्राप्त एक–एक करोड रुपैयाँ मध्य स्थानीय तहले योजना सम्पन्न गर्नका लागि थप रकम साझेदारी गर्नेछन् । साझेदारीका कारण एकातर्फ स्थानीय तहहरु जिम्मेबार र उत्तरदायी बनेर रकमको सदुपयोग गर्ने छन्भने अर्कोतर्फ सम्भावित अनियमिताको नियन्त्रण गर्न पनि उनीहरु सक्रिय हुनेमा शंका छैन् । पुर्वाधार बिकासमा बिनियोजन भएको रकमको जनस्तरबाट पनि अनुगमन र निगरानी गरौं । देखीने गरी काम बन्ने गरी बिनियोजन भएको बजेटको सदुपयोग गर्नमा चौतर्फी दबाब सिर्जना गरौं । बिगतमा भएका अनियमितताको पाठ सिकेर भावी दिनमा हुने अनियमिततालाई कम गर्न खबरदारी गरौं । सही ठाउँमा, सही उद्देश्य प्राप्तिका लागि बिनियोजन भएको बजेटबाट निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो तहबाट सक्दो सहयोग समेत गर्न सबै तह र तप्का लाग्न जरुरी छ ।